Haweeney Dilaa ah oo Khatar ku ah raga oo laga baadi goobayo dalka Kenya !! | BANAADIRSOM
Home Wararka Maanta Haweeney Dilaa ah oo Khatar ku ah raga oo laga baadi goobayo...
Haweeney Dilaa ah oo Khatar ku ah raga oo laga baadi goobayo dalka Kenya !!
Booliska dalka Kenya ayaa baadigoob ugu jira haweenay boolis ah oo lagu eedeeyay inay dishay laba nin, kuwaas oo la sheegay in horraantii isbuucan ay toogatay, mid ka mid ah labada nin ayaa boolis ahaa.
Haweenaydan oo lagu magacaabo Caroline Kangogo, ayaa warbaahinta dalka Kenya qabsatay kaddib markii ay magaalada Nakuru ku dishay askari magaciisa lagu sheegay John Ogweno. Meel 200km u jirta halka ay dhacdada koowaad ka dhacday, ayey ku dishay Peter Njiru oo 32 sano jir ah.
Marxaladaha ku xeeran dilka labada nin ayaa ah kuwo muran badan dhaliyay, ilaa hadda ma jirto cid wax badan ka og sababta loo dilay.
Bayaanka ay soo saareen booliska ee ay ku shaacinayaan baadi- goobka ka dhanka ah haweenaydan ayaa waxay ku tilmaameen inay la mid tahay sheeko ku jirta filimada cabsida leh .
Balse farqiga u dhexeeya sheekadan iyo mida filimada ayaa ah in tani ay tahay dhacda dhab ah. waxaana jira warar sheegaya in qaar ka mid ah saraakiisha sarsare ee booliiska ay dhunteen kadib markii Kagongo ay fariin u dirtay.
Kangogo ayaa looga shakisan yahay dilka nin ay saaxiibo ahaayeen oo boolis ah maalintii Isniinta . Dilka kadib ayaa la sheegay inay qaadatay bistoolad nooceeda tahay Ceska oo ay ku jirto rasaas.
Kaddib waxay u jihaysatay Juja, oo 200 kiiloomitir u jirta magaalada Nakuru halkaas oo ay hoteel ka kiraysatay. Dhibbanaha labaad ayey qolka ugu yeertay kaddibna madaxa ayey ka toogatay intii ay qolka ku jireen.
Xilli dambe isla habeenkaas Kangogo waxay maydka Peter Njiru uga carartay qolkii ay huteelka ka daganayd. Mid ka mid ah shaqaalaha huteelka ayey u sheegtay inay soo iibsanayso adeeg ayna wax yar kaddib soo noqon doonto. Balse haweenaydan Ayaan dib ugu soo noqonin huteelka.
Saraakiisha dowladda ee baaraya kiiskan ayaa ku tilmaamay mid la yaab leh sababtoo hal qori ayey u adeegsatay dhibanayaasheeda, iyada oo ku hubaysan bastoolad la soo xaday oo ay ku jiraan 14 xabadood.
Agaasimaha Waaxda Dambiyada George Kinoti, ayaa shacabka ka codsaday inay gacan ka geystaan soo qabashada haweeneyda uu ku tilmaamay “mid hubaysan oo qatar ah”.
Kangogo waxay ka soo shaqaysay saldhigyo boolis oo kala duwan, oo ay ku jiraan qaybta booliska ee maamula Tareenka, ka hor inta aan loo wareejin magaalada Nakuru, halkaas oo ay ka shaqeynaysay ku dhowaad saddex sano.
Previous articleRooble oo Qado Sharaf loogu sameeyay Deegaanka Dalxiiska Caan ku ah (Daawo Sawirada)
Next articleArsenal Oo Ka Baxday Wadahaladii Ay Kula Jirtay Xiddig Ay Aad U Doonaysay, Sabab – banaadirsom